July Dream: By the way - 03
Posted by JulyDream at 7:46 PM
တော်သေးတာပေါ့။ ကိုယ်အဲဒီမှာအလုပ်စဝင်တုံးက တရုံးလုံးလူ ၈၀ကျော်ရှိတာ အမျိုးသမီးက လက်ငါးချောင်းတောင်မပြည့်ဘူး။
fighting bro! All the best.
By the Way ကို ဖတ်ပြီး ပြုံးပြုံးလေး တွေးနေမိတယ်ဗျာ
ကိုယ့်ထက် ရာထူးကြီးတဲ့ လူတွေကို အုပ်ချုပ်ကိုင်တွယ်ရတာ နည်းတဲ့ပညာမဟုတ်ဘူး၊ အတွေ့ကြုံရတာပေါ့၊ နှခေါင်းလေးဖေါ်ရကနေ စင်ပေါ်ရောက်သွားတာတွေအများကြီး... ကျားရုံ